Booliska oo laga caawin doona baaritaanada dilka ''hedersmord'' - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Booliska oo laga caawin doona baaritaanada dilka ''hedersmord''
La daabacay fredag 10 augusti 2012 kl 11.23
Booliska ayaa awood u heli doona in ay u yeertaan koox quburo ah oo ka caawiya kiisaska dadka loogu shakiyo in ay u geysteen qof ehel la ah dilalka loogu magac daro ‘’dil sharafeed’’ sida uu ku waramay telifishinka SVT.
Golaha booliska qaranka ayaa go’aansaday qubarada ay noqon doonaan kuwa booliska la shaqeeya 24 saacadood marka ay booliska ay baarayaan dilalaka ceynkaasi ah.
Waxa loogu magac dray dil sharafka ayaa ah markii qof oo inta badan ah dumar uu dilo qof kale oo ehel la ah ka dib markii gabadha loogu shakiyo in sumcad daro u keentay qoyska ay ka dhalatay.
Waxa sharaf darida loo arko ayaa kala duwan waxay tusaale ahaan noqon karta gabadha oo diida guur waalidka u dooqay ama haweeney diidma ka muujiso guur aysan ku faraxsaneen.
Inta badan booliska ayaa gaara goobta uu ka dhaco fal dambiyeedka hase yeeshee waxaa dhacda in ay haleeli waayaan warbixino muhim ah u ah baaritaankooda dilka dhacay oo goorta ay ogaadaan ay noqoto xilli dambe oo aan waxba laga gaari karin.
"inta badan marka aan nimaadno meesha uu ka dhacay dilka, xaalada waa mid jahawareer ah," ayuu yiri Mattias Jönsson, oo ah sarkaal boolis oo jooga magaalada Malmö lana hadlay teilifishinka Svt.
Sarkaalkan ayaa sheegay in booliska ay diirada saaraan falka dhacay ama tacdiga balse aysan is weydiin haddii dilka dhacay uu yahay mid la xiriira waxa loogu magac daray dil sharaf.
Si deg deg ah ayay booliska awood ugu yeelan doonaan in ay kaashaaadaan quburo ku xeel dheer dilalka noocaas ah iyada qubarada yaqaan arrimahaasi ayaa sidoo kale ka caawin doona 21-ka hay’adood ee booliska loo siiyo waxabarasho ku saabsan dilalka loogu magac dary dil sharafeed.